⁭မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခညောင်း သော ကိုတုတ်ကြီး: August 2008
ဆရာ့ဆရာကြီးအားလုံး၏ ပုရောဟိတ်အားလုံး ပဏ္ဍိတ အားလုံး ဂုရုအားလုံး၏ မဟာ့မဟာ ဂုရုလေသံဖြင့်
Movie review, book review နိုင်ငံရေးအခြေအနေ review စသဖြင့် တခုခုကို ပြူးပြဲ ၊ ဆွဲလှန် အတင်းကန်ရော
လူအထင်ကြီးဖို့ ငါကွ၊ ငါဟဲ့၊ ငါတော့်၊ ငါလကွယ့် ဟု မသိမသာ ပါးပါးလေး လုပ်လိုစိတ်တွေက ထင်းကနဲ ၀င်းကနဲ လင်းကနဲ ပေါ်လာလိုက်သည်မှာ ပေါက်မြောက် တော့မည့် ယောဂီတဦး ဥဂ္ဂဟ နိမိတ် များရသကဲ့သို့။
ကိုယ့်လူတွေ ၊ ကိုယ့်ခေတ်ပြိုင်တွေ၊ ကိုယ့် ဧရာဝတီတွေ ၊ ကိုယ့် မဇ္ဈိမတွေ ၊ ကိုယ့်ကြေးမှုံတွေ ၊ ကိုယ့် မြန်မာ့အလင်းတွေ (ဟာရောကုန်ပါပြီ သတင်းစာသည် ဖြစ်ပါပေါ့လား) ကိုယ်နှင့်တခေတ်ခြင်း ဖြတ်သန်းလာသူတွေ(ခေါင်းနှင့်မဟုတ် ကိုယ်နှင့်) ၊ ထွီ …..တော်ဇမ်းဘာ.. စကားပြောရင် စာရေးရင် ကိုယ်တို့က ကိုယ်တို့က ၊ သူများကိုပြောလိုက်ရင် ကိုရင်တို့က.. မောင်ရင်တို့က ဆိုတဲ့ အင်မတန် ဒညင်းသီး ဆားစိမ် ၊ တမာရွက်ပြုတ် ငပိရည်တို့စရာတို့ဖြင့် စားထားပြီးသား သေးဖြင့်သာ အခွက်ကိုကော့ပန်း ပစ်ချင်စရာကောင်းသည့် အသုံးအနှုန်းများ ဖြင့် မသိမသာ ကြောကြောမောမော ဆက်ဆံတတ်သော ခွေးမသားများကို ဒေါက ကန်မိနေပြန်ပါပြီ အော် ဒုက္ခ..ဒုက္ခ..။
ကဲပါလေ…ဆက်စရာ ရှိတာကို မုဒိတာ ပွား ၊ ဥက္ခောထားဆက်ဦးမှဖြစ်ပေတော့မပေါ့…..။
ကျွန်ုပ်သည် ပျင်းပျင်းရှိလှသဖြင့် ကိုယ်ပိုင် ပိဋကတ်တိုက်မှ စာအုပ်ကလေးများအား တအုပ်ချင်း ပြန်လည် စီတန်း ဖုံသုတ်နေရင်း ဘိလပ်မှ ထုတ်သော စာအုပ်များ ကြားတွင်ညှပ်ထားသော စာအုပ်အပါးသေးသေးလေးများကို သေချာယူကာ ပြန်စီမည်လုပ်ရင်း တခုသော စာအုပ်ပါးလေး အဖုံးကိုဖတ်ကြည့်သော အခါ ဂုရုကြီး George Orwell ၏ How the poor die ဆိုသော စာအုပ်အပါးကလေးကိုတွေ့ တော့နိပ်ပြီ အတော်ပဲ ငါ Essay Review ရေးပြီး ဆရာလိုလို သမားလိုလို ရမ်းကုလိုလို ကွက်စိတ်ဆရာလိုလို ဦးရှင်ကြီးပင့်ဆရာလိုလို လုပ်လို့ ရပြီ ဟု အကြည်ဓါတ်ပေါက်ကာ ထိုစာအုပ်ပါးလေးအား သူ့နေရာသူ ပြန်ထားပြီးသကာလ သမိန်ပေါသွပ် ပါဝင်သော မင်္ဂလာ လက်ဆောင်စာအုပ်ကို ကောက်ယူကာ စာကြည့်မျက်မှန် ကလေးကို ကောက်တပ်လိုက်မိပါတော့၏။
သမာဓိအားကို အပြည့်အ၀ စုစည်းကာ လေ့လာသူ ပညာရှင်တဦး၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဆင်ခြင် ကြံဆ ရမ်းရွှီး ၊ စွတ်အာ၊ ပေါက်ကရပြော ၊ ကြားဖူးနားဝ ကိုးကား မျက်နှာထားဖြင့် မျက်မှောက်ကြုတ်ရင်း လေသာပြတင်းဖက် ခပ်ငေးငေး ခပ်တွေးတွေးကြည့်ရင်း သက်ပြင်းရှည်ကြီး ကို အသံထွက်အောင်ချရင်း အသံမထွက်အောင် အိးကို ပေါက်ထုတ်လိုက်မိပါတော့၏။
သမိန်ပေါသွပ် ပါဝင်သော မင်္ဂလာလက်ဆောင်ဆိုသည့် စာအုပ်ကို နောက်မှ review ရေးမည်။ မည်သူမျှတော့ ကိုယ့်ထက်အရင်ခေါင်းစဉ် တမျိုးမျိုး တပ်၍ လူတတ်ကြီး မ တတ်ကြီး မတ်တပ်ကြီး မလုပ်လောက်ပါဘူး လေ ။
သို့သော် စိတ်မချရ။ ကိုယ့်ဟာနှင့်ကိုယ် သမိန်ပေါသွပ် review အတွက်ပြင်းထန်သော အတွေးအခေါ်တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲနေရင်း ခေတ်ကာလ အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီသော ကြားဖူးခဲ့သည့် ပုံပြင်လေးတပုဒ်အား သတိရမိပါတော့၏။
ရာဇဂြိုလ်ပြည် နှင့် ဘယ်လို နည်းနှင့်မျှ မပါတ်သက်သော တိုင်းပြည်တပြည်ရှိ၏။
ထိုတိုင်းပြည်တွင် အနာတပိန်သူဌေးကြီး နှင့် ဘာမှမတော်စပ်သည့် ပွေးဝဲယားနာ(ဘီလျံနာထက် နာသော) သူဌေးကြီးတဦးနေထိုင်လေ၏။
ထိုသူဌေးကြီးနှင့် တခါမှ မသိသလို တသက်လုံးသေသည်အထိ မတွေ့ဖူး မကြားသော အရူးတယောက်လည်း ထိုတိုင်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်ကာ ထိုအရူး သည်လည်း တိရိစ္ဆာန်တို့ပြောသော မဂဓ ဘာသာ စကားအား လုံးဝမတတ်ကျွမ်းပေ။
ထိုအရူးသည် တရွာလုံးကို ဒုက္ခမပေးသော်လည်း ညရောက်လျှင် တညလုံး မအိပ်ပဲ “ငါကွ..ငါကွ ..တုတ်ကြီးကွ”
ဟု မနားတန်း အော်တတ်၏။
တနေ့သောအခါ ထိုအရူးအား ရပ်ရွာမှ ချော့မော့ကာ ဆေးဆရာကြီး ဇီဝကနှင့် လုံးဝမပတ်သက်သည့် ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု တဦးထံသို့ရပ်ရွာ စားရိတ်ဖြင့် နားငြီးသက်သာပြီးရောဟူသော သဘောဖြင့် လိုက်ပါ ပို့ ဆောင်ပေးလိုက်ကြ၏။
ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု ၏ လက်ချက်ဖြင့် အရူးမှာ တဖြေးဖြေး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံမှန်အနေအထားသို့ရောက်ရှိလာပြီဟု အားလုံးသော ပုထုဇဉ်တို့ ယုံကြည်ရမလိုဖြစ်လာသော ကာလတွင် ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု က အရူးအား ဇာတိဌာနေသို့ ပြန်ခွင့်မပေးခင် နောက်ဆုံး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စမ်းသက်ချက်အဖြစ် မေးခွန်းအချို့ကို စတင်မေးပါတော့၏။
ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု။ ။ ကဲ…ကိုတုတ်ကြီး ရေ ခင်ဗျား အိမ်ပြန်ရတော့မယ်ဗျ မပျော်ဘူးလား။
အရူး။ ။ ပျော်ပါသော်ကော ဆရာရယ် .. အိမ်က နွားမဒမ်းမလေး ဇီးကပ်တာထက်ပိုပျော်တယ်။
ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု မှာ အရူး၏ အဖြေကို သဘောကျစွာကောက်ချက်ချလိုက်သည်မှာ “အင်း..ဟုတ်ပေသားပဲ နွားမလေးကိုယ်ဝန်ရှိ၊ နွားလေးမွေး၊ နွားနို့ ညှစ် ”
ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု။ ။ဟုတ်ပြီဗျာ..ကိုတုတ်ကြီး.. နောက်ဆုံး မပြန်ခင် ခင်ဗျားကို မေးစရာလေးတခုမေးမယ်နော်။
အရူး။ ။ အောင်မယ်လေးဆရာရယ် အချင်းချင်းတွေပဲ မေးစမ်းပါ မေးပစ်လိုက်စမ်းပါ တုတ်ကြီးတို့ကဒါမျိုးဆို သိပ်ဖြေချင်တာ ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေ၊ဒီဗွီဘီ၊ အာအက်ဖ်အေ နဲ့ အင်တာနက် မဂ္ဂဇင်းတွေက လို ဟောဒီက ဒေါက်တာရမ်းကု က အချွန်နဲ့ မ မ ဘူး ဆိုတာ တုတ်ကြီးတို့ကသိပြီးသား ။
အရူးက ပြုံးပြုံးကြီးဖြေလျှက် လက်နှစ်ဖက်ပိုက်ကာ ကုလားထိုင်တွင်သက်တောင့်သက်သာမှီလိုက်၏။
မှီပြီးကာမှ သတိအနေအထားဖြင့်ခါးကိုပြန်မတ်ကာ လက်ဖ၀ါးနှစ်ဘက်ကို တေ့ကာ လက်ညှိုးလေး နှစ်ချောင်းကို ထိလိုက်ခွာလိုက် လုပ်ပြီးမှ ပြန်မှီ၏။ ပြီးတော့ မျက်နှာကြက်ပေါ်မှ စုတ်သပ် နေသော အိမ်မြှောင် ကို ပြုံးလျှက်စိုက်ကြည့်နေ၏။
ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု။ ။ ကဲ …ကိုတုတ်ကြီး ဒါဆို မေးမယ်ဗျာနော်။
အရူး။ ။ အဆင်သင့်ပဲဆရာရေ လည်ချောင်းတော့ရှင်းပါရစေ.. အဟမ်း….အဟမ်း.. ကဲ ရပြီ မေးပေတော့ဆရာ။
ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု။ ။ ကိုတုတ်ကြီး တကယ်လို့ ခင်ဗျားကို ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ကြိုက်နေတယ်ဗျာ…။
စကားမှမဆုံးသေးအရူးက ကြားဖြတ်လျှက် “ တကယ်လား ဆရာ….ချောမှဖြစ်မယ်နော် ချောမှ နောက်တော့ ယင်ဖိုတောင်မသမ်းမှဖြစ်မယ်” ဟု ပြောလည်းပြော မေးလည်းမေး သဘောထားလည်းပေးကာ ပြုံးစိစိဖြင့်
ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု။ ။ဟုတ်ပြီဗျာခင်ဗျားပြောသလိုမိန်းကလေးပါပဲ ….၊ ဆိုကြပါစို့
အဲဒီ မိန်းကလေးနဲ့ ခင်ဗျား အခု ဟောဒီအခန်းထဲမှာ နှစ်ယောက်ထဲ ရှိတယ်ဗျာ သူကလည်းခင်ဗျား သဘောရှိပါ ကိုကိုတုတ်ရယ်လို့ ပြောပြီ ခင်ဗျား ဘာဆက်လုပ်မလဲ…။
မေးခွန်းဆုံးသောအခါ အရူး၏ မျက်နှာသည် ရေနံဆီလောင်းခံလိုက်ရသော နေမင်းကြီးကဲ့သို့ တောက်ပ၀င်းထိန် လင်းလက်ကာ ပြုံးနေလိုက်သည်မှာ ပါးစပ်ပေါက်ကြီး နားရွက် နှစ်ဖက်သို့ ချိတ်မတတ်ပင် ။ ထို့နောက်အရူး၏ မျက်နှာ အမူအရာသည် ရှက်သလိုလို ချီတုံချတုံ ဖြစ်သလိုလို ပြောင်းလဲလာပြီး….“ဟာဂျာ…ရှက်ချာဂျီး..ဆရာကလဲ ” ဟု စကားပင် မပီတော့ပဲ ပြန်ပြောလိုက်၏။
ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု။ ။ ဟာမရှက်ပါနဲ့ဗျ… ကိုတုတ်ကြီးကလဲ ဒါ သဘာဝတရားပဲ မဟုတ်ဘူးလား ။
အရူးသည်ချက်ခြင်းပင် ကျွမ်းကျင်သူတယောက်၏ မျက်နှာပေးဖြင့်..“အိမ်း..ဟုတ်ပေသားပဲ …ဂေါတမ ဘုရားရှင်တောင်မှ အနော်မာသောင်ကို မြင်းစီးပြီး ကူးခဲ့ရသေးတာပဲ ” ဟု ဘာမှ မဆိုင်သော်လည်း မမှားသော စကားကိုပြောလာ၏။
ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု။ ။ကဲ ..ကိုတုတ်ကြီးရယ် စောစောက အခြေအနေမျိုး ဖြစ်ရင် ခင်ဗျား ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲ…။
အရူး။ ။ သြော်… ဆရာရယ်… ။ သူကလေးက ..မေတ္တာကလဲရှိ ၊မျက်စိကလဲကျ ၊ဟော်မုန်းကလဲကြွ အရွယ်ကလဲရှိ ၊ ဟောဒီက ကိုကိုတုတ်နဲ့ ကလဲ တခန်းထဲ အတူဆိုမှတော့..ဟား..ဟား…ဟား..ဟား…ဟား….
ဘယ်ပြောကောင်းမလဲဆရာရယ် ဟု ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးပြောချလိုက်ပြီး ရှက်ကိုးရှက်ကန်းမျက်နှာဖြင့် မျက်နှာပိုးသပ်ကာ ငြိမ်သွားတော့၏။
ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု။ ။ ဟုတ်ပြီဗျာ ။ ပြောမကောင်းတာလေးတွေကြားချင်နေတာဗျ ပြောစမ်းပါ ဈေးမကိုင်ပါနဲ့။
အရူး။ ။ သြော် ဝေးလိုက်တာ ဆရာရယ်…. သူကလေးက ကိုယ့်ရည်းစားသနာ ပဲကိုး ဒီတော့ အရင်ဆုံး
ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု။ ။ ဖက်ပြီးတော့…..?
အရူး။ ။ ဖက်ပြီးမှတော့ အရူးလားဆရာရယ် လက်တွေက ရေလည်မြန်ရတော့ အသက်ရှူသံတွေက ပြင်းလာမယ် လုံးဝ ကွက်တိလှုပ်ရှားရမယ်လေ ..ဒီတော့ သူ့ အပေါ်ရုံ အင်္ကျီကလေးကိုချွတ်မှာပေါ့….။
ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု။ ။ပြီးတော့…………?
အရူး။ ။ ပြီးမှတော့…ရှင်မီးအင်္ကျီပဲကျန်တာပေါ့ဆရာရယ် တဆင့်ချင်းပေါ့… အဆင့် ခုနှစ်ဆင့်အတိုင်း ကြိုးတုတ်ပြီး မတရားကျင့်တာမှမဟုတ်တာပဲ ဒီတော့စိတ်ရှည်ရမယ် သဘောထားမှန်ရမယ် သက်ဆိုင်သူတွေ ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ လက်ခံ နိုင်ရမယ်လေ ဗျာ။
ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု။ ။ ဟုတ်ပါပြီဗျာ ကြည်ဖြူပြီတဲ့ အဲဒီ ခုနှစ်ဆင့်အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဗျာ ဘာဆက်လုပ်မလဲဗျ….?
အရူး။ ။ဆြာရယ် ရှက်လာပီဂျ။
ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု။ ။မရှက်ပါနဲ့ ဆက်ပြောပါဗျ ကောင်းခန်းရောက်နေပြီ အဲဒီ ရှင်မီးအင်္ကျီလေးပြီးတော့ ဘာဆက်လုပ်မလဲဗျ။
အရူး ။ ။ အဲဒါပြီးတော့ အဟီး…. ထမီပေါ့ ဆရာရယ် ထမီပေါ့။
အရူး၏ အဖြေဆုံးသောအခါ ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကုသည် အားတက်သရောဖြင့် သူ၏ လူနာ ပုံမှန်တွေးခေါ်စဉ်းစား လာနိုင်ပြီဟု ယုံကြည်ကာ မြောက်တောက်တောက်ဖြင့် စိတ်ထဲတွင် “ငါဟဲ့ ရမ်းကု..” ဟု သုံးကြိမ်မြည်ကြွေးလိုက်ပြီး ဆက်မေးပြန်၏။
ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု။ ။ဟုတ်ပြီဗျာ အဆင့်တက်လာပြီ ..ကဲ ထမီကျွတ်ပြီ ဆိုမှတော့ ပွဲပဲဗျား..ဆက်ပါဦး ကိုတုတ်ကြီးရဲ့…။
အရူး ။ ။ ဟီးချက်တယ်ဂျာ…။
ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု။ ။ မရှက်ပါနဲ့ ဆက်ပါဗျ …ရွာကို မွန်းမလွဲခင် ပြန်ရအောင်လေဗျာ နော် ဆက်ပြောပါဗျ။
အရူး ။ ။ ဆက်ဆိုလဲ ရှေ့မျက်နှာနောက်ထား နားထောင်ပါ ဆရာရယ် ။
ပရောဂဆရာ ဒေါက်တာရမ်းကု။ ။မပူပါနဲ့ ကိုတုတ်ကြီးရယ် ကျနော်က ရမ်းကုပေမယ့် ဒါမျိုးတွေကြားပေါင်းများလှပါပြီ ဆက်မှသာဆက်ပြောပါ။
အရူး။ ။အဲလိုထမီလေးလဲချွတ်ပြီးရော …. အတဲယေး ရဲ့ ဘောင်းဘီယေးကိုချွတ်။
ပီးယဲ ပီးရော အတဲယေးဘောင်းဘီယေးထဲက မျှော့ကြိုးကိုထုတ်ပြီး တနေကုန် တရေကွင်းကျစ်မှာပေ့ါဂျ……………..တရေကွင်းကျစ်မှာပေါ့…………….. ဟူသတည်း။
ပုံပြင်ထဲက အရူး တုတ်ကြီးကတော့ သရေကွင်းပစ် တမ်းကို ရေရေလည်လည်ကစားဖို့ အားခဲထားသလို ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်သူများ ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ ၊ ဘာအလုပ်မှ ဟုတ်တိပတ်တိ တကယ်မလုပ်သောအပြင်မှ ရသော အလကားရသည့်စာမျက်နှာများ တွင်သာ တက်တက်အာတတ်သည့် ၈၈ မျိုးဆက်များ ၊ ကိုးဆယ့်ခြောက်မျိုးဆက်များ ၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ၊ ကျောင်းသူခေါင်းဆောင်များ။ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များ ၊ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ ၊ နအဖမှ နွားကြီးများနှင့် အားလုံးသော ဆရာ ဆရာမကြီးများ တို့ သည် သရေကွင်းပျော်ပျော်ကြီး ပစ်လာခဲ့သည်မှာ အပျိုမလေး နှင့်တူသော မြန်မာနိုင်ငံတော်သည် ၀စ်လစ်စလစ်ဖြင့် ကြုံသည့်ကောင်ကတက်ခွသွားခဲ့သည်မှာ မည်မျှကြာခဲ့သည်ဆိုလျှင် မဆလ ခေတ် တွင်လူဖြစ်သော ကျွန်ုပ် တုတ်ကြီးပင် နှုတ်ခမ်းမွှေးဖြူစပြုပြီ မဟုတ်ပါလားဟု တွေးမိရင်း ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် review တော်ကြီးများရေးရန် ယာယီလက်လျှော့ရင်း ကိုယ့်ဘောင်းဘီ ကိုယ်ဆွဲချွတ်ကာ မျှော့ကြိုးကို စိတ်ရှည်လက်ရှည် ထုတ်ခြင်း စတင်မိပါတော့၏။
Posted by Nyein Zay Oo at 4:58 PM0comments
Posted by Nyein Zay Oo at 7:33 PM0comments
ကျွန်ုပ်သည် ရေချိုးကန်ထဲတွင် မိမိရရ ကျကျ နန စိမ်ရင်း ခေါင်းလျှော်ရည်ဘူးကို ယူကာ ဘယ်ဘက်လက်ဝါးထဲသို့ ဖျစ်ချလိုက်သည်။
ပူနွေး အငွေ့ တဟုန်ဟုန် ထနေသော ရေပူထဲတွင် တုတ်ကြီးသည် ဘင်္ဂလား ကျွဲ ရေချသကဲ့သို့ အကြိုက်တွေ့နေရင်း ဘယ်လက်ထဲမှ ခေါင်းလျှော်ရည် တို့ကို ဆံပင် ကြားသို့ သုတ်ကာ အသေအချာ ကုတ်ခြစ် ဖွညှစ် အမြှပ်ထွက်စေပြီး
စံပါယ်နံ့ကို အရသာခံကာ ရှူရှိုက်နေရင်း အတိတ်ကာလတခုသို့ပြန်လည်အလည်အပတ်သွားမိတော့၏။
တုတ်ကြီးအလောင်းအလျာဖြစ်သော ကျွန်ုပ်က ဘောင်းဘီတိုကလေးဖြင့် မနက်စောစော အိမ်ပေါ်ထပ်မှပြေးဆင်းလာခဲ့၏။
အဘိုးဖြစ်သူက ရွှေတိဂုံ ဘုရား တနင်္ဂနွေ တံမြက်စည်းအသင်းတွင် ဖွန်ကြောင်ရန်တခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အလွန်အင်မတန်တံမြက်စည်းသိမ်းချင်နေသော အကိုဝမ်းကွဲဖြစ်သူအား
တုတ်ကြီးကမသိချင်ယောင်ဆောင်ကာ ဦးလေးဖြစ်သူများ နိုးလာမည့်အချိန်ကို ဗိုက်တဂွီဂွီဖြင့် စောင့်နေခိုက် အဒေါ်အလတ်ဖြစ်သူက “ဟဲ့ မောင်တုတ်ကြီး မျက်နှာသစ်ပြီးပြီလား ”
“ ဒါဆို လာခဲ့ငါ့အခန်းထဲကို သနပ်ခါးလိမ်းရမယ်” ။
တုတ်ကြီး စိတ်ပျက်သွားရပြီ မနက်တိုင်း သနပ်ခါးပါးကွက်ကြား ကြီးဖြင့် ပဲဟင်းအိုးထဲပြုတ်ကျသော
ကြွက်စုတ်ကဲ့သို့ ခံစားရ၏ ။သို့သော် သနပ်ခါးအလိမ်းမခံလျှင် ရာဇ၀တ်အိုးဒုတ်နဲ့ ထိုးတာကမှ
သက်သာပေလိမ့်မည် ဆိုတော့ကာ တုတ်ကြီး ကုတ်ကုတ်ကလေးပင် အဒေါ်လတ်၏ အခန်းထဲသို့ ၀င်သွား၏ ။
အဒေါ်လတ်က မှန်တင်ခုံ ဘေး မှ ကျွန်းစင်လေးပေါ်ကကျောက်ပြင်ပေါ်မှ ရှင်မတောင်သနပ်ခါးအရည်ကျဲများကို ညာလက်ညှိုးဖြင့် ပယ်ပယ်နယ်နယ်ယူကာ တုတ်ကြီး၏ ခေါင်းကို ဆယ်ပေါင်တူဖြင့် ဖိသကဲ့သို့ ဖိရင်း ကျကျ နန လိမ်းကျံပေးပေတော့၏။
အနှီသနပ်ခါးလိမ်းခြင်း ကိစ္စပြီးပြန်တော့ တုတ်ကြီး၏ ဆံပင် စုတ်ဖွား ထိုးထိုးထောင်ထောင်ကို အုန်းဆီဖြင့် ကျကျ နန လိမ်းပေးကာ ဆင်ဆွယ်ဘီးကလေးဖြင့် ဘေးခွဲ ခွဲပေးလိုက်၏ ။
ခုတော့ မောင်တုတ်ကြီး ဘိုကေ ဘေးခွဲနှင့် သနပ်ခါး ပါးကွက်ကြားဖြင့် တအိမ်လုံး လဲ ကာလနဂါးမှအစ နိုးကြပေပြီ။
ဦးလေးဖြစ်သူ များက လမ်းထိပ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သို့ချီတက်တော့မည်။
တုတ်ကြီး က အိမ်မှာ ဆို အငယ်ဆုံး တုတ်ကြီးထက်ငယ်တာ က အိမ်က အမြီးမပါသည့် ခွေး ပဲရှိတော့သည် ထို့ကြောင့် အကိုများကလက်ဖက်ရည်ဆိုင် ထိုင်ထိုင် အပြင်သွားသွား
မည်သည့်အခါမျှ တုတ်ကြီးကို အဖက်လုပ်ကာမခေါ်ကြ။
ဦးလေး အငယ်က “ တုတ်ကြီး ရေ ဒီနေ့ ငါတို့ ရွှေ တိဂုံသွားကြမယ် အပုတို့ သားအမိလိုက်ပို့ဖို့ကွ မင်း အဘိုး က မင်းပါခေါ်သွားလို့ပြောတယ် ”
“ဟမ် ..လက်ဖက်ရည်ဆိုင် မထိုင်တော့ဘူးလား မြေနီကုန်းက ဒေါ်တင်တင်အေး မုန့် ဟင်းခါးလေး မ၀ါးရတော့ဘူးလား” တုတ်ကြီး နည်းနည်းတော့ စိတ်ပျက်သွားမိ၏ သို့သော် အဘိုးအမိန့်ကို ဘယ်သူမှ လွန်ဆန်ရဲတာမဟုတ်။
“ အော် မင်းကလဲ လမ်းကြုံနေတာပဲ အရင် ၀င် ၀ါးမယ်လေကွ ပူတတ်ရန်ကော”
ဂလု ....၊တုတ်ကြီးရင်ထဲမှ အလုံးကြီးကျသွား၏။
တုတ်ကြီးတို့ ခြံနှင့် ဘေးချင်းကပ်လျှက် ခြံမှ ဒေါ်သိန်းတင်တို့ မိသားစုသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ ထွက်သွားခဲ့သည်မှာ လေးငါးနှစ်ခန့်ရှိပေပြီ ထိုအိမ်ကြီးတွင် ဒေါ်သိန်းတင်၏ မိဘနှစ်ပါး ဖြစ်သော ဦးလှ မောင် တို့ လင်မယားသာကျန်ခဲ့၏။
ထိုအဖိုးကြီး အဖွားကြီးများသည် အလွန် မတန် ကလေးချစ်တတ်သဖြင့် တုတ်ကြီးအတွက် ဂွင် ကောင်း တခု တုတ်ကြီးသာ မမိုက်မဲပဲ ထို ပညာရပ်နှင့်အတွေ့အကြုံကို နိုင်ငံရေးလောကထဲတွင် လက်တွေ့အသုံးချပါက ယခု နာမည် ကျော်ကြားလူကြိုက်နည်းနေသော
ဆရာများ နောက်ကောက် အတိအကျ ကျသွားနိုင်လောက်သည်အထိ ထို အိုကြီးအိုမ ဇနီးမောင်နှံဆီမှ ညာစားခဲ့သည်။
ယခုတော့ ဒေါ်သိန်းတင် တို့ မိသားစု မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခနပြန်လာလည်သဖြင့် အိမ်မှ ကားကို ခနယူသုံးမည်ဖြစ်ပြီး ဦးလေးလုပ်သူက ဒရိုင်ဘာ လုပ်ကာ တုတ်ကြီးကတော့ စပါယ်ယာ လုံးလုံးဖြစ်ရပြီ ။ မဟာဘုတ်ထူရန်မလို အင်္ဂ၀ိဇ္ဖာပညာဖြင့်တွက်ရန်မလို လုံးဝ ဥဿုံ ကျိန်းသေနေပေပြီ။
ကျွန်ုပ်နှင့် ဦးလေးဖြစ်သူ သည် ကားကလေးဖြင့် ဒေါ်သိန်းတင်နှင့် သူ၏ သမီး ဖြစ်သူ မမပုအားသွားကြိုကြ၏။
တုတ်ကြီးက ရှေ့ ခုံမှာ ထိုင်၏ ။ နောက်ခုံမှာ မမပုနှင့် ဒေါ်သိန်းတင်တို့ ထိုင်ကြ၏။
မမပုက ကျွန်ုပ်အားကြည့်ကာ “ဟယ် မောင်လေး တုတ်တုတ် ၊ မမတို့ထွက်သွားတုန်းက တကယ့် ကလေးလေး ကြည့်စမ်းပါဦး”
ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲ တွင်တော့ “ဟမ် ဟုတ်ပြီလားလေ ဟိုတုန်းကတော့ ကလေးလေးပေါ့ဗျ အဲဒီထက် ပို ပြီး ကြာရင် ကျုပ်အမေဗိုက်ထဲမှာပေါ့ ဟုတ်ဘူးလား” ဟု တွေးနေမိစဉ်
မမပု က သူ့ ပါးစပ်မှ တဆက်တည်း ပင် “ အိုး .. ဆိုး ဟော့” ဟု စတင်ငြီးတွားလိုက်ပါ၏။
ကျွန်ုပ်ကတော့ ဆိုးဟော့တွေ ဖိုးကြော့တွေမသိ လက်နှစ်ဘက်ကို ဗိုက်ပေါ်တင်ကာ ကျကျနန ကားကူရှင်ကို မှီရင်း အရသာခံလိုက်ပါလာတော့၏။
သို့ဖြင့် မြေနီကုန်း ဒေါ်တင်တင်အေး ဆိုင်တွင် မုန့်  ဟင်းခါးဝင်ဝါး၏ ။
တုတ်ကြီး နှစ်ပွဲဝါးလိုက်၏ ။
ဒီတခါလဲ မမပုက “ အိုး ...ဆိုးဟော့ မန်မီ”..
ဘာတွေများ ဆိုးဟော့ပါလိမ့် မမပုရယ် လို့တော့ကျွန်ုပ်တွေးမိ၏။
သို့ဖြင့် စားသောက်ပြီးနောက် ရွှေတိဂုံဘုရားသို့ ဦးတည် ထွက်လာခဲ့ရာက ကားကလေးသည် ဦးဝိစာရ အ၀ိုင်းနားသို့ရောက်သောအခါ ရိုးသားစွာ သမ္မာအာဇီဝဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြသော စပါယ်ပန်းသည် တို့ ကိုတွေ့ရ၏။
ကျနော့်ဦးလေးက ကား ကို လမ်းဘေး သို့ဖြေးဖြေး ထိုးရပ်ကာ လှပမွှေးပျံ့  လွန်းသည့် စပါယ် ပန်းကုံး ဖြူလွအိညက် နုထွား လေးများ အား ၀ယ်လိုက်တော့...
မမပု က ဖင်ကြွသွားကာ ယောင်ထ လိုက်သည်ကို နောက်ကြည့်မှန်မှ ကျွန်ုပ်မြင်လိုက်ရချိန်တွင် “ အိုး..... အိုင် နိုး .... အိုင်နိုး သဇ် စမဲလ် .... မန်မီ ...အိုင်နိုး...”
“ရက်စ်..ရက်စ်.... အိုင် ဂေါ့ ထ် အစ်ထ် ... ဂျက်ဇမင်း..... ဂျက်ဇမင်း...... ” ဟု ပါ အော်လိုက်ပေတော့၏။
ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲတွင် လွန်ခဲ့သော လေးငါးနှစ်က နိုင်ငံခြားသို့ထွက်သွားသော အင်မတိအင်မတန် မှတ်ဥာဏ်မကောင်းတော့သည့် မမပုအတွက်စိတ်ထဲတွင် မကောင်း၊ ထို့ပြင် မမပု ပြောသော ကျွန်ုပ်လုံးဝ နားမလည်သည့် ဘာသာစကားများကိုလည်း
တံတွေး တွေ တလှေကြီးထွက်အောင် ပြောချင်စိတ်လေးတော့ဖြစ်လာမိကာ စိတ်ထဲတွင် မမပု ပြောသည့် အရာများအား မှတ်မိအောင် အထပ်ထပ် ပြန်ရွတ်ရင်း ဘုရားသို့ရောက်ခဲ့သည်။
ဘုရား ပေါ် က ပြန်ဆင်းလာ ၊ မမပုတို့သားအမိ သူတို့ အိမ်ပြန်ပို့ပြီးနောက် တူဝရီးနှစ်ယောက် လမ်းထိပ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘက်ပြန်လှည့်လာကြတော့ မမပု ပြောသော စကားအားလုံးလိုလိုလောက်နီးပါးကို မေ့ လုနီးပါးဖြစ်သွားလေပြီ။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွင် ပဲပလာတာကို ပြူးတူးပြဲတဲစားရင်း မမပုပြောခဲ့သမျှ ထဲက ရေရေလည်လည် မှတ်မိသည့် စကားလုံးမှာကား “ အိုး ဇရက်မင်း ” ဟုသာဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိုဇရက်မင်း ဆိုသည့် စကားကို မမေ့ရန် လည်း ပြောခဲ့သော သူ၏ နာမည်နှင့်ပါ တွဲလျှက် ယနေ့တိုင်
မှတ်မိနေခဲ့သည်မှာကား ဇရက်မင်း မပု ဟူ၍ ဖြစ်လေသတည်း။
တုတ်ကြီးသည်ရေချိုး ကန်ထဲမှ လက်ကိုင် ကွင်းကလေးကို အားပြုထလိုက်ပြီး ယနေ့ခေတ်၏ မြောက်မြားလှစွာသော ဇရက်မင်း မပုများအကြောင်းတွေးရင်း သီချင်းလေး တအေးအေးဖြင့် ဇရက်မင်းစည်းစိမ်ခံကာ ညစာ စားရန် ပြင်ဆင်ရဦးမည် ဖြစ်သဖြင့် မွှေးပွကိုယ်သုတ်သဘက်ကလေး ခါးပတ်ကာ မီးဖိုဖက်သို့ “ အိုးမိုင်း ဒါလင်..အို့  အို့ အို့ ....ပစ်မသွားနဲ့ မုန်းမှာစိုးပါတယ် ....” ဆိုသည့် ကော်ပီသီချင်းကိုဆိုကာ ယောင်းမကို လက်တဖက်ဖြင့် ယူလိုက်ပါတော့၏။
Posted by Nyein Zay Oo at 5:17 PM4comments
ကျွန်ုပ်သည် ကုလားပဲခွဲခြမ်းလေးများအား ရေစိမ်ပြီးသကာလ ငရုတ်သီး ပွကြီးများအား ရေစိမ်ကာ ကြက်သွန်ဖြူ လေးငါးဥကို ဓါးပြားဖြင့်ရိုက်ရင်း မီးဖိုထဲတွင် ငုတ်တုတ် အတွေးနယ်ချဲ့နေမိ၏။
မီးဖိုပေါ်မှ ကောက်ရိုးမှိုနှင့်ကန်စွန်းရွက်ကြော် ကလဲ တရှဲရှဲ မြည် လာပေပြီဖြစ်၏။ ကန်စွန်းရွက် နွမ်းသွားအောင် ကြော်လိုက်လျှင် သိပ် စားလို့ မကောင်း ..။
ဒီတော့ ကန်စွန်းရွက်ကြော်အိုးကို မီးဖိုပေါ်မှ ချကာ ရေနွေးအိုး ကို တည်လိုက်၏။
ဆိတ်ရိုးများ ကို သေချာ ကျကျနန မနူး မနပ်ပြုတ်ထားသော အိုး ထဲသို့ ကုလားပဲရေစိမ်များ ထည့်လိုက်ပြီးပြီ .. တကတည်း ဆီသတ်ရဦးမှာပေါ့
ဂျင်း ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်နီ လေး ပါလေယုံ ရောထောင်းထားသော ရောထောင်း များအား ဆီ ပူအိုးတည်ကာ သာသာ ငြိမ့်ငြိမ့်လေးထည့်လိုက်၏ သာသာလေးမှ တကယ့်သာသာလေး
နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် တဦး project တင်သလို proposal ရေးသလို seminar မှာ ခပ်တည်တည် လေပြေ ပစ်သလို... ။
မကြာလိုက်ပါဘူး ရှဲကနဲရှဲကနဲ...။
သစ်သားယောင်းမဖြင့် ခပ် ဆတ်ဆတ်လေးမွှေပေးလိုက်ပြီး ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်ကလေးများ ကို ၀ါးရင်းနိုင်ငံရေးသမားဟန်ဖြင့်(မှားလို့ ပါ ဗျာ ၀ါရင့် နိုင်ငံရေးသမားလို့ ဆိုချင်တာ) ပြည်တွင်းမှ ဦးဘဂျမ်း လေးများ ကို မယားငယ်ပေးပေးသလို ဒယ်အိုးထဲသို့ ပစ် ထည့်လိုက်၏။
တုတ်ကြီး၏ ညစာကတော့ မကြာခင်အဆင်သင့် ဖြစ်တော့မည် ။
ကျွန်ုပ်သည် မစ္စတာ ဘု နှင့် မစ္စက် ဘု ကို ဖိတ်ကြားကျွေးမွေးရန် အမေရိကန် နိုင်ငံ၏ အိမ်ဖြူတော်သို့ ဖုန်းဆက်လိုက်၏။
ကျွန်ုပ် ။ ။ ဟဲလို... ဆြာ... ဆြာ ဘု နဲ့စကားပြောချင်ပါတယ်
အော်ပရေတာ။ ။ ဘာကိစ္စရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ရမလဲ၊ဘယ်သူလဲ၊ဘယ်ကလဲ ဘာကြောင့်လဲ .....?
ကျွန်ုပ်။ ။ ဆြာ .. ကျွန်ုပ်နာမည် တုတ်ကြီးပါ ဟိုရေးသည်ရေး ရေးပါတယ် မြန်မာလူမျိုးပါ ၈၈မှာ လူတွေ သတ်ခံရတယ် ဆြာ စက်တင်ဘာ ၂၀၀၇မှာဘုန်းကြီးတွေ သေတယ်ဆြာ နာဂစ်မှာ လေမုန်တိုင်းတိုက်လို့ အကုန်သေတယ်ဆြာ
အော်ပရေတာ။ ။ ဟုတ်ပြီ ခနစောင့်ပါ မစ္စတာ ပိုက်ဆိုးဒင့် (သွားတိုက်ဆေး နာမည် မဟုတ်ပါ တုတ်ကြီး အဲသလို ကြားလိုက်ရသဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။) ကို အသိပေးလိုက်ပါ့မယ်။
ဖုံးထဲမှာ Barbie girl ဆိုသော သီချင်း သံကိုကြားနေရ၏..
[hi josh, how are you? im quite good.
this isacrap song.
သီချင်း က နှစ်ခေါက်တောင် နားထောင်လိုက်ရ၏။
ဖုံးထဲမှသီချင်းသံရပ်သွားတော့ တဖက်မှ ဦးလေးဘု က ဘိလပ်လို စတင်မိတ်ဆက်၏ အိုင် အမ် ဘု သ ပိုက်ဆိုးဒင့် အော့ဖ် ယူ နိုက်တက် စတိတ်စ် တဲ့...။
ကျွန်ုပ် ။ ။ ဟိုင်းဆြာ အင်မတန်ဝမ်းသာပါတယ် ဆြာ ခုလို ဖုန်းခေါ်တာကို ပြန်လည်ဖြေကြားပေးတဲ့တွက်လဲ အထူး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သူမတူအောင် တော်တဲ့ထက်တဲ့ ငါဟဲ့တုတ်ကြီးလို့အောက်ခြေနည်းနည်းလွတ်သွားမိပါတယ် ဆြာ ရိုးသားစွာဝန်ခံတာပါဆြာ။
ဘု။ ။ အိုး ..လေးဇားဘာဒယ်( ရမ်ဘို ရုပ်ရှင်အား သမ္မတ ဘု အသေအချာကြည့်ထားပြီးဖြစ်မည်ထင်သည် မြန်မာလိုတောင် သူက လေးစားတတ်နေပြီကိုး)
ကျွန်ုပ်။ ။ ဟား..... ဆြာ မိုင်ဆြာ .... သမ္မတကြီးက အင်မတန်တော်ပါလား မြန်မာလိုတောင်ပြောတတ်နေပြီပဲ
ဘု။ ။ ကဲ လိုရင်းလေးပြောပါလား မောင်တုတ်ကြီး
ကျွန်ုပ် ။ ။ အော် ဟုတ်ကဲ့ ဆြာ ကျနော် ထမင်းစားဖိတ်ချင်လို့ပါ ပဲကုလားဟင်းနဲ့ ကန်စွန်းရွက်ကြော် ပါ
ဘု။ ။ ဟုတ်ပြီ ဒါဆို ပရောဂျက်တင်လိုက် စဉ်းစားပေးမယ်( တဖက်သို့တခုခု လှမ်းပြောနေရင်း ဖုန်းခွက်ကို လက်နှင့်ကာလိုက်သလို အနေအထားဖြင့် မသက်မသာပြောလာသောစကား ။ ကျွန်ုပ်ပြောသည်ကိုကြားသည်မထင်)
ကျွန်ုပ် ။ ။ နိုးနိုး ဆြာ မဟုတ်ဘူး ။ မဟုတ်ဘူး ထမင်းစားဖိတ်တာပါ ဆြာ... ကျနော်ချက်ထားတဲ့ဗမာ့ လက်ရာကို မြည်းစေချင်လို့ ။
ဘု။ ။ ဂျေးဇူး ဒင်ဘာဒယ် နောက်များမှပေါ့ မြန်မာဒွေနဲ့ ဒမင်း ဇားရဒါ မျက်နှာ တံဒွေးနဲ့ ၀ိုင်း ဘက် နေသလိုဘာဘဲဗျား ဘာဒဂု မ အလုပ် မ ဗျစ် ဘာဘူး ။
သူ့ စကားဆုံးတော့ ကလစ်...........ဟုသောမြည်သံဖြင့် ဖုန်းကျသွားပေတော့၏။
အင်း ဒီညတော့ တုတ်ကြီး တယောက်ထဲ ထမင်းဝါးရပေတော့မည်။ အော် ငါ့ကံနှယ် သမ္မတ ကြီးနဲ့များ ထမင်းလေး တူတူစားပြီး ကာတွန်းစာအုပ် တွေအကြောင်းဆွေးနွေးမလားဆိုတဲ့စိတ်ကူး ကလေး ယခုတော့ ...............
ထူးပါဘူးလေ youtube က barbie girl သီချင်းကလေးကိုပဲ နားထောင်ပါတော့မယ်.....။
တုတ်ကြီး ခေတ္တတာဝတိံသာ
Posted by Nyein Zay Oo at 8:31 PM2comments
ခေါင်းခြောက်အောင် တွေးကာ မအေးရတယ်
ဖိနပ်တော် ကောက်ကာ မ ပါလို့
ခေတ္တ( တာဝတိံသာ)
Posted by Nyein Zay Oo at 6:24 PM0comments